मेयर सा’ब कुलमानलाई चिन्नुहुन्छ ? |
मेयर सा’ब कुलमानलाई चिन्नुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति :2019-06-25 14:11:55
मेयर ज्यू, हामी तपाईंको समर्थनमा थियौं । तर यसको मतलब यो होईन कि, तपाई घोडा कुदाइ रहने र हामी मूकदर्शक भएर टुलुटुलु हेरिरहने । तपाईंको रबाफको सिलसिला यदि यसरी नै जारी भइरहने हो भने हामीले कसरी विश्वास राख्ने तपाई माथी ? तपाईं जस्तो देशको कर्मठ योद्धा, पूर्व शिक्षकले बोल्ने तरिका के यही हो त …?
उदाहरणको लागि जीविकोपार्जनको लागि हामी भैंसी पाल्छौँ । तर भैसीले मलमूत्र विसर्जनचाहिँ सधै अरुको बारीमा गर्छ भने हामीलाई के फाइदा ? दूध र मलमूत्रको लागी नै भैंसी पाल्ने हो । यदि सधैं यस्तै भयो भने आफ्नो बारीमा सागसब्जी कसरी फलाउने ?
५२ प्रतिशतको संख्या महिलाले ओगटेको देशमा तमाम महिला दिदीबहिनीकै भोटले जनप्रतिनिधि भई इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर हुन सफल तपाईंले तिनै महिला दिदीबहिनीलाई महिलाकै कार्यक्रममा गएर ‘र…डी’ भन्ने ? ‘र….डी जिन्दावाद’ भन्न कहाँसम्म न्यायसंगत हो ? तपाईंलाई के अब त्यो अर्काको बारीमा गएर मलमूत्र विसर्जन गर्ने भैसीसंग तुलना गर्ने अवस्था आएकै हो त ? त्यसो भए एउटा कुरा याद राख्नुस्, तपाईंले महिला त हो ‘र…डी’ भनेको भन्दै गर्दा सम्पूर्ण महिला समेटिएका छन् । गएर सोध्नुहोस् आफ्नी आमा, श्रीमती, छोरी अनि बहिनीहरुलाई, तपाइकै शब्दमा ए ‘र…डी’हरु हो, के छ खबर भनेर ?
दाल बिक्री भएको छ ‘र…डी’ को कारणले ?
यो कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो म अन्योलमा छु । हरेक घरमा सधैंजसो खानामा दाल भात पाक्छ । कहिले दाल किन्न हजुरआमा जान्छिन्, कहिले आमा, कहिले १० सानी बहिनी । के उसो भए तपाइको भनाइ अनुसार त्यो दाल किन्न जाने नाबालक बहिनी, अनि ती बुढी हजुरआमा पनि ‘र…डी’ हुन् त मेयर साब ? कि तपाईंको भाषामा दाल खाने जति सबै ‘र…डी’ हुन ?
लिपस्टिक, अन्त्र–बस्त्र बिक्री भएको छ ‘र…डी’को कारणले ?
मेयरसाब लिपस्टिक र अन्त्र–बस्त्र आवश्यकता हुने र पहुँच अनुसार सारा नारीले लगाउछन् । के तिनिहरु सबै ‘र…डी’ हुन् त ? सायद तपाईंको परिवारका धेरै सदस्यहरु पनि लगाउनुहुन्छ होला लिपस्टिक र अन्त्र–बस्त्र । अब तपाई के भन्नुहुन्छ ? तपाईंको यस प्रकारको बोलीले सबै महिलालाई आघात पुगेको छ ।
कन्डम, पिल्स बिक्री भएको छ ‘र…डी’को कारणले ?
कन्डम र पिल्स परिवार नियोजनका अस्थायी साधन हुन् । सन्तानको चाहाना पुगेको र असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट बच्नको लागी यी चिजहरु प्रयोग गरिन्छ । यहाँको भनाइ अनुसार के यस्ता साधन प्रयोग गर्ने बुवा–आमा, काका–काकी, मामा–माइजू, दिदी भिनाजु, दाई–भाउजु पनि ‘र…डी’कै दर्जाका हुन् त ? र अर्को कुरा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नुहोस् भनेर ‘जनहितमा जारी सन्देश’ भन्छ । के यस्ता कार्यक्रम, प्रचार–प्रसार रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिकामा बिज्ञापन गर्दै हिँड्नु मात्र ठिक हो । यो कुराको महत्व बुझेर सतर्कता अपनाएर कन्डम र पिल्स किन्नुचाहिँ ‘र…डी’ले गर्ने काम हो ? सरकारले कन्डम निःशुल्क बाँडिरहेको छ । अब यस्तो अवस्थामा ‘र…डी’ कसलाई भन्ने मेयरसाब ? के अब तपाई सरकारमाथी पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ ? जसरी प्रत्येक व्यक्तिको तौल तराजुले जोख्दा फरक–फरक हुन्छ त्यसरी नै मानिसको बानी र व्यबहार पनि फरक–फरक हुन्छ भन्ने कुरा मनन् होस यहाँलाई । होलान् केही त्यस्ता अनैतिक काम गर्नेहरु पनि । तर सबैलाई एउटै तराजुले जोख्न खोज्ने मेयर सा’बको शब्द चयन र बोली ‘….लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो’ हो ।
शब्द चयन खोई ?
‘मलाई आउदैन । म ठकुरीको छोरा हुँ र ? मलाइ राम्रो बोल्न आउदैन । म थारुको छोरा हुँ, के भनेको यस्तो ? ‘तपाई जस्तो जनप्रतिनिधि, जनताको भोटले विजयी भएको उपमहानगरपालिकाको मेयर जस्तो व्यक्तिले तिनै भोट दिने जनतासँग सभ्य, नम्र भएर बोल्न आउदैन ? भोट माग्ने बेला त खुबै नम्र हुनुभयो होला । त्यतिखेर राम्रो बोली र शब्द पनि निस्के होलान् । अहिले के भयो त ? राम्रो बोल्न आउदैन भने सिक्नुस, कम बोल्नुस । तर जथाभावी नबोल्नुहोस् । तपाईंको बोली नै तपाईंको लागि गलपासो भाको छ ।
कुलमान घिसिङलाई तपाइ पनि चिन्नुहुन्छ होला । उनी त ठकुरीका छोरा होइनन्, तामाङ (लामा) हुन् । कति शिष्ट र सभ्य भाषामा बोल्छन् । यदि तपाइकै तरिकाले लिङ्ग र योनीलाई पनि ठाडो भाषामा बोल्दै हिँड्यो भने समाजले त के तपाईं स्वयंले पचाउनुहोला त ?सभ्य भाषा बोल्न ठकुरीलाई मात्रै आउँछ भन्ने सोच कहाँसम्मको संकिर्ण हो ? कोही खास जाती, क्षेत्र र लिंगको हुँदैमा उसलाई राम्रो नराम्रो गर्न आउने नआउने भन्ने हुँदैन । राम्रो बोली र व्यवहार भनेको मान्छेको संस्कार र विवेकले निर्धारण गर्ने कुरा हुन् ।
स्मरण रहोस् केही समय पहिले तत्कालीन कानूनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले अपाच्य शब्द प्रयोग गरेकोमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तपाईंचै आफ्नो गल्ती स्विकार्न नसक्ने ? तपाईंलाई २९ पटक ‘र…डी,’ र ‘र…डी जिन्दावाद’ भन्न कसले छुट दियो ? तपाईंले महिला दिदीबहिनी भएकै कार्यक्रममा त यसरी जथाभावी बोल्नुहुन्छ भने, महिला विरुद्ध पर्दा पछाडि तपाईंका गतिविधी कस्ता होलान् ? सोचनीय विषय भएको छ ।
त्रीयुगा २, उदपुर
आयोगका पदाधिकारीलाई निश्चिन्त भएर काम गर्न मन्त्री अर्यालको निर्देशन
अरुकै लागि बाँच्नुपर्दो रहेछ
महिला जनप्रतिनिधिका तीन वर्ष: बैठकमा जाऊ ताली बजाऊ
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर डाँगीले कार्यक्रम संयोजक तथा जनप्रतिनिधिलाई पैसा खर्च
कोरोनाको बहानामा मर्कामा पत्रकार
-महिला खबर- कोभिड-१९को नाममा पत्रकारलाई भोको राख्न नहुने प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी कुमारी
वन्दना राणा यूएनको सिड कमिटीमा दक्षिण एशियाकै एक मात्र उम्मेदवार
-महिला खबर- ललितपुर । महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणा यूएन सिड कमिटीको निर्वाचनमा नेपालका तर्फबाट उम्मेदवार घोषणा
काठमाडौँ महानगरले दियो प्रसुतिगृहलाई पीसीआर र वीरलाई स्वचालित न्युक्लेइक एसिड एट्राक्सन मेसिन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र प्रसुति तथा स्त्री रोग
सामूहिक खेतीले फेरियो जीवन
– मिलन बिछोड- चुलोचौकाको काम सकिएपछि प्रायः छरछिमेकी, आफन्त चेलीबेटी भेला भएर कि गफ गरेर कि
महिला जनप्रतिनिधिका तीन वर्ष : बैठकमा जाऊ ताली बजाऊ
बन्दाबन्दीमा ‘आमाको माया’ एप्स वरदान साबित
छोरीभन्दा छोराको चाहना बढ्दो
आमाको सम्झनामा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री
नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न नागरिक समाजको माग
सुस्मिताको ससुराबाट बलात्कार पछि परिवारले हत्या गरेको प्रहरी खुलासा
बलात्कार कसुरमा १८ वर्ष कैद सजाय